Fanaraha-maso ny « cas contact »: ampiasaina ny paikady « tracing contact » | NewsMada
Fanaraha-maso ny « cas contact »: ampiasaina ny paikady « tracing contact »
Ho fiarovana ny fahasalaman’ireo “cas contact”, hamafisina ny fitiliana azy ireo amin’ny alalan’ny fampiasana ny paikady “tracing contact.
Hamafisina ny ady amin’ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara. Nampahafantarin’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka, omaly, ny paikady “tracing contact” ho fanaraha-maso akaiky ireo olona nifampikasika amin’ny marary ho fiarovana ny ain’izy ireo sy ny manodidina azy.
Fomba iray entina mikaroka faran’izay haingana ireo olona rehetra nifandray na nifanerasera mivantana tamina olona efa voamarina fa mitondra valanaretina Covid-19 ka ampanaovina avy hatrany fitiliana izany.
Ireo izay tsy mbola misy soratraretina akory kanefa mitondra na nitondra ny valanaretina, hita avy hatrany amin’ity “tracing contact” ity. Marihina ihany koa fa ireo olona manana aretina mitaiza toy ny diabeta na fiakarana tosidra no tena mampiseho ilay tranga misy fahasarotana ankehitriny. Mila mailo sy mitandrina fatratra, araka izany, ireny olona ireny. Amin’ireo toerana misy tranga fahasarotana ankehitriny, atao avy hatrany ihany koa ny fitiliana ireo olona nifanerasera tamin’izay mitondra ny valanaretina, ny fitiliana ny siramamy sy ny tosidra.
Atao izany hanapahana ifotony faran’izay haingana ny fiparitahan’ny valanaretina any amin’ireo toerana misy trangana valanaretina Covid -19 na aiza na aiza eto Madagasikara, araka ny fanambaran’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka hatrany.